ब्रेकिङ : नेपाल आएका बहराइनका राजकुमार किन फसे वि’वादमा ?
काठमाडौ : बहराइनमा राजकुमार मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलीफा सोमबार नेपाल आइपुगेका छन् । उनी २००० डोज को’रोना भा’इरसवि’रुद्धको खोप लिएर नेपाल आएपछि वि’वादमा मुछि’एका छन् ।
औ’षधि व्यवस्था विभागले बराइनका राजकुमारलाई भा’इरस वि’रुद्धको खोप ल्याउने अनु’मति नदिइएको भए पनि उनले खो’प ल्याएपछि चे’कजाँच सुरु गरेको जा’नकारी दिएको छ । विभागका अनुसार खो’प ल्याउन पूर्व स्वी’कृती आवश्यक पर्छ ।
उता, ल’ण्डनस्थित बहराइनको दूता’वासले राजकुमार मोहम्मदलाई औ’षधि ल्याउने अनुमति दिइएको भएपनि आ’शंकाका कारण उनीमाथि चेक’जाँच सुरु भएको बताएको छ । नेपालस्थित बहराइको दू’ताबासका अनुसार राजकुमार मोहम्मदले ल्याएको उक्त खो’प गोरखा जिल्लाको चु’मनुरबी गाउँमा वि|तरण गरिनेछ ।
राजकुमार मोहम्मदको भ्र’मण व्यवस्थापक सेभेन समिट्स ट्रेकका प्रवक्ता थानेश्वर गुरागाईँले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई उक्त टोली सात दिनको क्वारेन्टिन बसाइपछि गोरखा जाने र त्यहाँ खो’प वितरण गरेपछि सगरमाथा आरो’हणका लागि जाने योजना रहेको थियो ।
कसरी भि’त्रियो खोप ?
नेपालमा २००० डोज कोरोनाको खोप विनाअनुमति राजकुमार मोहम्मदले कसरी भि¥त्र्याए भन्ने विषयलाई लिएर छलफल सुरु भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
औ’षधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले भने, “हामीलाई बहराइनका राजकुमार २००० डोज को’रोना खो’प लिएर आएका छन् भन्ने जानकारी आएको छ । यसको विषयमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ ।”
विभागका प्रवक्ता केसीका अनुसार नेपालमा कुनै पनि औ’षधि ल्याउनका सरकारको अनुमति लिन जरुरी छ । सरकारलाई औ’षधि सही तरिकाले भण्डा’रण भएको समेत जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा माघ २६ गतेदेखि को’रोनाविरुद्ध’को खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने कार्यक्रम अन्त’रगत हाल ६५ वर्ष उमेरसमूह माथिका व्यक्तिहरुले खो\_प लगाइरहेका छन् । -रातोपाटी बाट
२०७७ चैत्र ६, शुक्रबार ०८:४१ गते 1 Minute 1289 Views
भिजिट भिसामा आउनेले युएईमा काम नपाउने, काम गरेको पाइए चर्को जरिवाना !
मलेसिया रोजगार – मलेसियाले जनवरी २८ बाट बिदेशी कामदार भर्ना लिदै ।